Esi sahluko sokuqala UkuCinga nokuPhelela Yenzelwe ukwazisa kuwe imiba nje embalwa incwadi ejongene nayo. Uninzi lwezifundo luya kubonakala lungaqhelekanga. Ezinye zazo zinokumangalisa. Ungafumanisa ukuba bonke bakhuthaza ulwazelelelo. Njengokuba uqhelene nengcinga, kwaye ucinga indlela yakho ngencwadi, uyakufumanisa ukuba iya icaca ngakumbi, kwaye usendleleni yokuphuhlisa ukuqonda kwezinto ezithile ezisisiseko kodwa ezilapha eziyimfihlakalo zobomi- kwaye ngakumbi ngawe .
Incwadi icacisa ngenjongo yobomi. Leyo njongo ayisiyokufumana nje ukonwaba, nokuba kulapha okanye emva koko. Ayikuko nokuba "usindise" umphefumlo kabani. Eyona njongo yobomi, injongo eya kuthi yanelise ingqiqo kunye nokuqiqa, yile: ukuba umntu ngamnye kuthi uya kuba nolwazi ngokuthe ngcembe ngokwazi; Oko kukuthi, uyayazi indalo, kwaye ngaphakathi nangaphaya nangaphaya kwendalo. Ngokwemvelo kuthetha ukuba yonke into inokwenziwa ukuba yaziwe ngeemvakalelo.
Le ncwadi ikwazisa kuwe ngokwakho. Sikuzisa umyalezo malunga nawe: isiqu sakho esimangalisayo esihlala emzimbeni wakho. Mhlawumbi uhlala uzichaza kunye nomzimba wakho; kwaye xa uzama ukucinga ngesiqu sakho ucinga ke ngesixhobo sakho somzimba. Ngamandla esiqhelo uthethile ngomzimba wakho njengo "Ndi", njengo "mna". Uqhele ukusebenzisa amabinzana anjengokuthi "ekuzalweni kwam," na "ekufeni kwam"; Kwaye "ndazibona ndisesipilini," kwaye "ndaziphumla," "ndazisika," njalo njalo, xa ngokwenyani ingumzimba wakho othetha ngawo. Ukuqonda ukuba uyintoni kufuneka uqale ubone ngokucacileyo umahluko phakathi kwakho nomzimba ohlala kuwo. Into yokuba usebenzisa igama "umzimba wam" ngokulula njengokuba usebenzisa naliphi na kulawo acatshulweyo kungabonisa ukuba awukulungelanga kwaphela ukwenza lo mahluko ubalulekileyo.
Uyayazi indlela oweza ngayo umzimba wakho kweli hlabathi; kodwa ukuba ungene njani emzimbeni wakho awazi. Awuzange ungene kuyo de kwaba lixesha elithile emva kokuba izelwe; unyaka, mhlawumbi, okanye iminyaka eliqela; kodwa ngale nto uyazi kancinci okanye akukho nto, kuba inkumbulo yomzimba wakho yaqala kuphela emva kokuba ungene emzimbeni wakho. Uyazi into malunga nezinto ezenziwe ngumzimba wakho oguqukayo; kodwa le nto uyiyo awuyazi; awukazazi ukuba unjani emzimbeni wakho. Uyalazi igama elahlula umzimba wakho kwimizimba yabanye; kwaye oku ufunde ukucinga ngegama lakho. Okubalulekileyo kukuba, kufuneka uyazi, hayi ukuba ungubani, kodwa uyazi ukuba ungubani-uyazazi, kodwa okwangoku awukazazi njengawe, isazisi esingapheliyo. Uyazi ukuba umzimba wakho uyaphila, kwaye ulindele ukuba uya kufa; kuba kuyinyani ukuba wonke umzimba ophilayo uyafa ngexesha. Umzimba wakho ubunesiqalo, kwaye uyakuba nesiphelo; kwaye ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni kuxhomekeke kwimithetho yehlabathi yeziganeko, yotshintsho, yexesha. Wena, nangona kunjalo, awuxhomekekanga kwimithetho echaphazela umzimba wakho. Nangona umzimba wakho utshintsha izinto ubunjwe rhoqo kuzo kunokuba uzitshintsha iimpahla ozinxibileyo, ubunikazi bakho abuguquki. Uhlala ufana nawe.
Xa uzibuza, "Ndiyazi ntoni ukuba ndingubani?" ubukho besazisi sakho ekugqibeleni buza kukubangela ukuba uphendule ngendlela enjengale: "Nokuba yintoni na endiyiyo, ndiyazi ukuba ubuncinci ndiyazi; ndiyazi ubuncinci bokuba nolwazi." Kwaye uqhubeka kule nto unokuthi: "Ke ngoko ndiyazi ukuba ndinguye. Ndiyazi, ngaphezu koko, ukuba ndinguye; kwaye andinguye omnye. Ndiyazi ukuba obu bubungqina bam endibaziyo-- obu buchule bokuzicingela nokuzicingela endibuva ngokucacileyo - abutshintshi kubomi bam bonke, nangona yonke enye into endiyaziyo ibonakala ikwimeko yotshintsho rhoqo. " Ukuqhubela phambili koku ungathi: "Andazi ukuba yintoni le ingaguqukiyo ingaguqukiyo; kodwa ndiyazi ukuba kulo mzimba womntu, endiwaziyo ngexesha lam lokuvuka, kukho into eyaziyo; into evakalayo kwaye uyanqwenela kwaye uyacinga, kodwa loo nto ayitshintshi; into eyaziyo ethanda kwaye inyanzelise lomzimba ukuba wenze, kodwa ngokucacileyo ayingomzimba. Ngokucacileyo le nto iyaziyo, nokuba yintoni, ndim. "
Izivamvo zakho zizinto eziphilayo; iiyunithi ezingabonakaliyo zendalo-yendalo; ezi zinto ziqala ukungena kuwo onke amalungu omzimba wakho; zizinto ezo, nangona zingenangqondo, ziyazi njengemisebenzi yazo. Iimvakalelo zakho zisebenza njengamaziko, ukuhambisa okubonakalayo phakathi kwezinto zendalo kunye nomatshini womntu osebenzayo. Imvakalelo ngoonozakuzaku bendalo enkundleni yakho. Umzimba wakho kunye neengqondo zawo azinawo amandla okusebenza ngokuzithandela; hayi ngaphezulu kweglavu yakho apho ukwazi ukuziva kwaye wenze khona. Endaweni yokuba lawo mandla nguwe, opharetha, isiqu sakho esaziwayo, into oyenzileyo.
Ngaphandle kwakho, umenzi, umatshini akanako ukufezekisa nantoni na. Imisebenzi engazibandakanyiyo yomzimba wakho-umsebenzi wokwakha, wokulungisa, wokulungisa izicwili, njalo njalo-uqhutywa ngokuzenzekelayo ngumatshini wokuphefumla njengoko usebenza kwaye uhambelana nomatshini omkhulu wotshintsho. Lo msebenzi uqhelekileyo wendalo emzimbeni wakho uhlala uphazanyiswa, nangona kunjalo, kukucinga kwakho okungalungelelananga kunye nokungaqhelekanga: umsebenzi wonakele kwaye awunakwenziwa kwinqanaba lokuba ubangele ukonakalisa nokungalingani komzimba ngokuvumela iimvakalelo zakho kunye neminqweno yakho ukuba isebenze ngaphandle kwakho ulawulo lokuqonda. Ke ngoko, ukuze indalo ivunyelwe ukubuyisela umatshini wakho ngaphandle kokuphazamiseka kweengcinga kunye neemvakalelo zakho, kuyabonelelwa ukuba uya kumana ukuyeka; indalo emzimbeni wakho inika ukuba iqhina eligcina wena kunye nemvakalelo kunye ngamanye amaxesha likhululekile, ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo. Oku kuphumla okanye ukuyeka ukuhamba kwengqondo kukulala.
Ngelixa umzimba wakho uleleyo awungeni ngaphandle kwawo; ngandlela ithile ukude nayo. Kodwa ngalo lonke ixesha uvusa umzimba wakho uyaqonda ngoko nangoko ukuba nguwe lo "mna" wawungaphambi kokuba uwushiye umzimba wakho ulele. Umzimba wakho, nokuba uvukile okanye ulele, awazi nto, nanini na. Oko kuyazi, oko kucinga, nguwe ngokwakho, umenzi osemzimbeni wakho. Oku kubonakala xa ucinga ukuba awucingi ngelixa umzimba wakho ulele; Ubuncinci, ukuba ucinga ngexesha lokulala awazi okanye awukhumbuli, xa uvusa izivamvo zomzimba wakho, ubusoloko ucinga ntoni.
Ukulala nokuba nzulu okanye liphupha. Ubuthongo obunzulu yimeko apho urhoxa kuyo, kwaye apho ungadibaniyo neengqondo; Yimeko apho izivamvo ziyeke khona ukusebenza ngenxa yokunqanyulwa kumandla ezisebenza kuwo, leliphi igunya onguwe, umenzi. Iphupha yimeko yeqela elikhethekileyo; imeko apho iingqondo zakho ziguqulwe ukusuka kwizinto zangaphandle zendalo ukuze zisebenze ngaphakathi kwindalo, zisebenza ngokunxulumene nezifundo zezinto ezibonakalayo ngexesha lokuvuka. Xa, emva kwethuba lokulala ubuthongo obunzulu, ungena kwakhona emzimbeni wakho, kwaoko uvusa izivamvo kwaye uqalise ukusebenza ngazo kwakhona njengomsebenzisi okrelekrele kumatshini wakho, uhlala ucinga, ethetha, kwaye esebenza njengemvakalelo- kwaye- Umnqweno onjalo. Kwaye kumkhwa wobomi bonke uzibonakalisa kwangoko kunye nomzimba wakho: "bendilele," utsho; "ngoku ndivukile."
Kodwa emzimbeni wakho nangaphandle komzimba wakho, ngokuchanekileyo uvukile kwaye ulele yonke imihla; ngobomi kunye nangokufa, nakwimimandla emva kokufa; kwaye ukusuka ebomini uye ebomini kubo bonke ubomi bakho-isazisi sakho kunye nemvakalelo yakho yesazisi iyaqhubeka. Isazisi sakho siyinto yokwenene, kwaye sihlala sibukho nawe; kodwa kuyimfihlakalo into engenakuqondwa yingqondo kabani. Nangona ingenakubanjwa ziimvakalelo kodwa uyabazi ubukho bayo. Uyayiqonda njengemvakalelo; unemvakalelo yokuzazisa; imvakalelo yokuzibona, yokuzithanda; uziva, ngaphandle kombuzo okanye ulungelelanisa, ukuba ungumntu ohlukileyo ngokufanayo oqhubeka nobomi.
Kuyimfuneko ukuba uqonde malunga nokuphila kwakhona kunye nekamva, kungenjalo akunakwenzeka ukuphendula ngumahluko kubuntu kunye nakwimilo. Ukuqinisekisa ukuba ukungalingani kokuzalwa kunye nesikhululo, sobutyebi kunye nentlupheko, impilo kunye nokugula, kubangelwa yingozi okanye ngamathuba kukuchaswa komthetho nobulungisa. Ngapha koko, ukubonakalisa ubukrelekrele, ubungqondi, ubuchule, izipho, amandla, amandla, isidima; okanye, ukungazi, ukungazi, ubuthathaka, ubuvila, ububi, kunye nobukhulu okanye ubuncinci besimilo kwezi, njengokuvela kwilifa lomzimba, zichasene nengqondo ephilileyo kunye nokuqiqa. Ufuzo lunento yokwenza nomzimba; kodwa isimilo senziwa kukucinga komntu. Umthetho nobulungisa buyalilawula eli lizwe lokuzalwa nelokufa, kungenjalo alinakuqhubeka kwiindlela zalo; nomthetho nobulungisa ziyaphumelela kwimicimbi yoluntu. Kodwa isiphumo asisoloko silandela kwangoko unobangela. Ukuhlwayela akulandelwa kwangoko ngokuvuna. Ngokunjalo, iziphumo zesenzo okanye yengcinga isenokungabonakali kude kube semva kwexesha elide lokungenelela. Asinakubona okwenzekayo phakathi kwengcinga kunye nesenzo kunye neziphumo zazo, kanye njengokuba singenakubona okwenzekayo emhlabeni phakathi kwexesha lokuhlwayela kunye nokuvuna; kodwa umntu ngamnye emzimbeni womntu uzenzela owakhe umthetho njengommiselo ngoko akucingayo nangento ayenzayo, nangona isenokungazi ukuba umisel'umthetho na; kwaye ayazi nje ukuba ugqirha uya kugcwaliswa nini, njengephupha, ngoku okanye kubomi bexesha elizayo emhlabeni.
Usuku kunye nobomi bonke ngokufanayo ziyafana; Ngamaxesha aphindaphindiweyo obukho obuqhubekayo apho umenzi asebenzela khona ikamva lakhe kunye nokulinganisa iakhawunti yakhe yobomi ngobomi. Ubusuku nokufa, nako, kuyafana kakhulu: xa utyibilika uyeka umzimba wakho uphumle kwaye ulale, uya kumava afana ncam nalawo udlula kuwo xa ushiya umzimba ekufeni. Amaphupha akho asebusuku, ngapha koko, anokuthelekiswa nemeko yasemva kokufa ethe wadlula kuyo rhoqo: omabini la manqanaba ngamanqanaba omsebenzi owenzayo; kuzo zombini uhlala phezu kweengcinga kunye nezenzo zakho zokuvuka, izivamvo zakho zisasebenza kwindalo, kodwa kwimeko yangaphakathi yendalo. Kwaye ixesha lobusuku lokulala ubuthongo obunzulu, xa izivamvo zingasasebenzi- imeko yokulibala apho kungekho nkumbulo yayo nayiphi na into - iyahambelana nexesha elingenanto apho ulinde embundwini wehlabathi elibonakalayo kude kube ngumzuzu qhagamshela kwakhona ngeemvakalelo zakho kumzimba omtsha wenyama: umzimba wosana okanye umzimba womntwana owenzelwe wena.
Eyona mfihlakalo inkulu kukuZithanda kwakho okwenene- loo Mntu mkhulu ungekho emzimbeni wakho; hayi kweli lizwe lokuzalwa nelokufa; kodwa, ngokungafi ngokungafiyo kuMhlaba oGcweleyo osisigxina, bubukho kunye nawe ngalo lonke ixesha lokuphila kwakho, ngalo lonke ixesha lokulala nokufa.
Ukukhangela komntu ubomi into eya kuthi yanelise enyanisweni kukufuna isiqu sakhe sokwenyani; isazisi, isiqu sakho kunye ne-i-ness, nganye nganye eyaziyo kancinci, kwaye ivakalelwa kwaye inqwenela ukuyazi. Yiyo loo nto isiQinisekiso sokwenyani siza kuchongwa njengoLwazi-ngokwakho, okwenyani nangona kungaziwa ukuba injongo yokufuna komntu. Kukusisigxina, ukugqibelela, ukuzalisekiswa, okukhangelwe kodwa kungafunyanwa kubudlelwane babantu nakwinzame. Ngaphaya koko, isiqu sakho sokwenene ngumcebisi nomgwebi othetha entliziyweni njengesazela kunye nomsebenzi, njengokulunga kunye nokuqiqa, njengomthetho nobulungisa-ngaphandle komntu ebeya kuba ngaphezulu kwesilwanyana.
UPlato, oyena mntu ubalaseleyo kwaye ngummeli wezithandi zobulumko zaseGrisi, esetyenziswa njengomgaqo kubalandeli bakhe kwisikolo sakhe sefilosofi, iAkhademi: "Zazi ngokwakho" - gnothi seauton. Ukusuka kwimibhalo yakhe kuya kubonakala ngathi wayenokuqonda kwe-Self uqobo, nangona kungekho nalinye igama alisebenzisileyo elinikezelwe esiNgesini njengayo nayiphi na into eyoneleyo ngaphezu "komphefumlo". UPlato wasebenzisa indlela yokubuza malunga nokufunyanwa kwesiqu sakho. Kukho ubugcisa obukhulu ekuxhaphazeni abalinganiswa bakhe; ekuveliseni iziphumo zakhe ezimangalisayo. Indlela yakhe ye-dialectics ilula kwaye inzulu. Umfundi owonqena ngengqondo, onomdla wokonwatyiswa kunokufunda, uya kucinga ukuba uPlato uyadinisa. Ngokucacileyo indlela yakhe yokuthetha yayikukuqeqesha ingqondo, ukuze akwazi ukulandela ikhondo lokuqiqa, kwaye angalibali imibuzo kunye neempendulo kwincoko; Kungenjalo umntu akanakukwazi ukugweba izigqibo ezifikelelwe kwiingxoxo. Ngokuqinisekileyo, uPlato wayengenanjongo yokunika umfundi ulwazi oluninzi. Kungenzeka ukuba wayezimisele ukuqeqesha ingqondo ekucingeni, ukuze kuthi ngokucinga kwakhe akhanyiselwe kwaye akhokelwe kulwazi ngesihloko sakhe. Le, yindlela yeSocrates, yinkqubo ye-dialectical yemibuzo ekrelekrele kunye neempendulo ezithi ukuba zilandelwe ngokuqinisekileyo ziya kumnceda umntu ukuba afunde indlela yokucinga; nasekuqeqesheni ingqondo ukuba icinge kakuhle uPlato wenze ngakumbi mhlawumbi kunaye nawuphi na omnye utitshala. Kodwa akukho mibhalo yehle ize kuthi apho axelela ukuba ucinga ntoni, okanye yintoni na ingqondo; okanye yintoni uqobo lwangempela, okanye indlela yolwazi ngayo. Omnye kufuneka ajonge phambili.
Imfundiso yakudala yase-India ishwankathelwe kwingxelo efihlakeleyo: "nguwe lowo" (tat tvam asi). Imfundiso ayicacisi, nangona kunjalo, yintoni u "lowo" okanye uyintoni "wena"; okanye indlela u "that" kunye no "wena" zidibene njani, okanye njani ukuba zichongwe njani. Kodwa ukuba la magama anentsingiselo kufuneka achazwe ngendlela eqondakalayo. Isixhobo sayo yonke intanda-bulumko yamaIndiya- ukuthatha umbono ngokubanzi wezikolo eziphambili- kubonakala ngathi emntwini kukho into engafiyo ehlala ihleli iyinxalenye yendibaniselwano okanye into yendalo iphela, njengokuhla Amanzi olwandle yinxalenye yolwandle, okanye njengokuba intlantsi enye inelangatye apho iqala khona kwaye ikhoyo; kwaye, ngokubhekele phaya, ukuba lo mntu into, le nto yenziwe ngumenzi- okanye, njengoko kubizwa kwizikolo eziphambili, i-atman, okanye i-purusha, -yahlulwe kwinto yonke jikelele sisikhuselo sengqondo, maya , nto leyo ebangela umenzi osemntwini azicingele ngokwahlukileyo nanjengokomntu; Ngelixa, ootitshala babhengeza, akukho mntu uzimeleyo ngaphandle kwento enkulu yendalo iphela, ebizwa ngokuba yiBrahman.
Imfundiso, engaphezulu, yeyokuba iziqwenga ze-Brahman yendalo iphela ziphantsi kobukho bomntu kunye nokubandezeleka okungaqondakaliyo, ukungazi ukuba bangobani kunye neBrahman yendalo iphela; Ubotshelelwe kwivili lokuzalwa kunye nokufa kunye nokuphinda ubonakalise indalo, kude kube, emva kwexesha elide, zonke iziqwenga ngokuthe ngcembe ziya kube ziphinde zadityaniswa kwiBrahman yendalo iphela. Isizathu okanye isidingo okanye ukunqweneleka kweBrahman yokuhamba ngale nkqubo inzima kwaye ibuhlungu njengamaqhekeza okanye amathontsi awachazwanga. Kwaye ayiboniswanga indlela ekucingelwa ukuba i-Brahman yendalo iphelele ngayo okanye enokuthi izuze ngayo kuyo; okanye ukuba ziphi na iziqwengana ezizuza ngayo; okanye incedwa njani indalo. Ubomi bonke bomntu bungabonakala njengengxaki engenamsebenzi ngaphandle kwenqaku okanye isizathu.
Nangona kunjalo, indlela ibonakalisiwe apho umntu oqeqeshwe ngokufanelekileyo, efuna "ukuzikhetha," okanye "inkululeko" kubukhoboka bengqondo bendalo, anokuthi ngomzamo wobuqhawe asuke kubunzima, okanye kwindalo engeyiyo, aqhubeke phambili ukusinda ngokubanzi kwindalo. Inkululeko kufuneka ifumaneke, kuthiwa, ngokwenza i-yoga; ngokuba ngeyoga, kuthiwa, ukucinga kunokuba kuqeqeshwe kangangokuba i-atman, i-purusha-umenzi womzimba-ifunde ukucinezela okanye ukutshabalalisa iimvakalelo kunye neminqweno yayo, kwaye ichithe umbono ocinga ukuba kudala ubambekile ; ngaloo ndlela ikhululwe kwimfuno yobukho bomntu, ekugqibeleni iphinda ibuyiselwe kwiBrahman yendalo iphela.
Kukho konke oku kukho imizila yenyaniso, kwaye ke ngenxa yoko kulunge kakhulu. I-yogi ifunda ukulawula umzimba wayo kunye nokuqeqesha iimvakalelo kunye neminqweno. Unokufunda ukulawula iingqondo zakhe ukuya kuthi ga apho anokuthi, ngokuthanda kwakhe, abe nolwazi ngemicimbi yangaphakathi kwabo baqhele ukubonwa ziimvakalelo zomntu ezingafundiswanga, kwaye ke angabanakho ukuphonononga kwaye aqhelane namazwe kwindalo Iimfihlakalo kuninzi lwabantu. Usenokuthi, ngokubhekele phaya, afikelele kwinqanaba eliphezulu lolawulo oluthile lwamandla endalo. Zonke ezo ngokungathandabuzekiyo zibeka umntu ngokwahlukileyo kubuninzi babenzi abangaqeqeshwanga. Kodwa nangona inkqubo yeyoga ifuna "ukukhulula," okanye "ukwahlula," umntu oziqulethayo ekukhohlisweni kweemvakalelo, kubonakala kucacile ukuba ayinakuze ikhokele enye ngaphaya kwemida yendalo. Ngokucacileyo oku kungenxa yokungaqondi malunga nengqondo.
Akubonakali ngathi iingqondo zemvakalelo kunye nomnqweno zithathelwe ingqalelo kwiinkqubo zokucinga zaseMpuma. Ubungqina boku bufumaneka kwiincwadi ezine zePatanjali's Yoga Aphorisms, nakwiinkcazo ezahlukeneyo ngalo msebenzi wakudala. I-Patanjali yeyona nto ihlonitshwayo kwaye imele izithandi zobulumko zase India. Imibhalo yakhe inzulu. Kodwa kubonakala kunokwenzeka ukuba imfundiso yakhe yokwenene ilahlekile okanye yagcinwa iyimfihlo; kwii-sutras ezifihlakeleyo ezibizwa ngegama lakhe zinokubonakala ngathi ziyaphazamisa okanye zenze ukuba kungenzeki eyona njongo bajolise kuyo. Ukuphazamiseka okunje kunokuqhubeka kungathandabuzeki ukutyhubela iinkulungwane kuya kuchazwa kuphela ekukhanyeni kwento ebekwe kwesi sahluko nakwizahluko ezimalunga nokuziva kunye nomnqweno emntwini.
Imfundiso yaseMpuma, njengezinye iifilosofi, ijongene nemfihlakalo yokuzazi emzimbeni womntu, kunye nemfihlelo yobudlelwane phakathi kwento leyo nomzimba wayo, nendalo, nendalo iphela. Kodwa ootitshala baseIndiya ababonisi ukuba bayazi ukuba yintoni le ingumntu ozaziyo - u-atman, u-purusha, umenzi-womntu - unje, wahlukile kwindalo: akukho mahluko ucacileyo wenziweyo phakathi komenzi-emzimbeni kunye Umzimba ongowemvelo. Ukusilela ukubona okanye ukubonisa lo mahluko ngokucacileyo kungenxa yokungaqondi okuqinisekileyo okanye ukungaqondi kakuhle kwemvakalelo kunye nomnqweno. Kuyimfuneko ukuba uvakalelo kunye nomnqweno zichazwe ngeli nqanaba.
Yile: Wonke umntu ufundisiwe ukuba akholelwe ukuba izivamvo zomzimba zihlanu ngenani, kwaye uvakalelo olo yenye yezivamvo. Imvakalelo, njengoko kuchaziwe kule ncwadi, ziiyunithi zendalo, izinto eziziziqalelo, ziyazi njengemisebenzi yazo kodwa zingenangqondo. Zine kuphela izivamvo: ukubona, ukuva, ukungcamla, nokujoja; kwimvakalelo nganye kukho ilungu elikhethekileyo; kodwa akukho lungu likhethekileyo lokuziva kuba uvakalelo-nangona luvakala ngomzimba- ayisiyiyo yomzimba, ayiyiyo eyendalo. Yenye yezinto ezimbini zomenzi. Izilwanyana nazo zinemvakalelo kunye nomnqweno, kodwa izilwanyana zihlengahlengiso ebantwini, njengoko kuchaziwe kamva.
Emzimbeni womntu, imvakalelo kunye nomnqweno ngamandla aqinisekileyo asebenza kulo matshini wendalo. Akukho namnye kwezi zivamvo zine - uziva. Imvakalelo, inkangeleko yomenzi, kukuba emzimbeni oziva, othi uve umzimba kwaye uve uluvo olugqithiselwe emzimbeni ngeemvakalelo ezine, njengoluvo. Ngapha koko, inokuthi ngokwamanqanaba ahlukeneyo ibone ukubonwa okuphezulu, njengemood, iatmosferi, isibhengezo; iyakwazi ukuva into elungileyo nengalunganga, kwaye iyaziva nezilumkiso zesazela. Umnqweno, into esebenzayo, ngamandla azi ukuba uhambisa umzimba ekufezekiseni injongo yomenzi. Imisebenzi yabenzi ngaxeshanye kuyo yomibini imiba yayo: yiyo loo nto yonke iminqweno ivela kwiimvakalelo, kwaye zonke iimvakalelo zivelisa umnqweno.
Imfundiso yaseMpuma iyayiqonda inyani yokuba ukuze umntu afumane ulwazi lokuziqonda emzimbeni, kufuneka akhululwe ekukhohlisweni kweemvakalelo, nasekucingeni okungachananga nakwizenzo ezibangelwa kukusilela ukulawula iimvakalelo neminqweno yakhe. . Kodwa ayidluli kwindlela ephosakeleyo yokuba imvakalelo yenye yezivamvo zomzimba. Ngokuchasene noko, ootitshala bathi ukubamba okanye ukuziva yinto yesihlanu; Lo mnqweno ukwangowomzimba; kwaye imvakalelo kunye nomnqweno zizinto zendalo emzimbeni. Ngokwale ntelekelelo kuyaphikiswa ukuba u-purusha, okanye u-atman-umenzi wezinto, uvakalelo-kunye-nomnqweno-kufuneka ayicinezele ngokupheleleyo imvakalelo, kwaye kufuneka ayitshabalalise, "abulale" umnqweno.
Ngaphandle kokungaqondi kwabo kwemvakalelo kunye nomnqweno ootitshala baseIndiya abaniki bungqina bokuba banolwazi okanye ukuqonda kweThathu yoBuntu. Kwingxelo engachazwanga: "nguwe lowo," kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba u "wena" ekubhekiswa kuye ngu-atman, u-purusha-umntu ozimeleyo; Kwaye u "lowo" athe "wena" wachongwa ngaloo ndlela ngumntu wonke, uBrahman. Akukho mahluko wenziwe phakathi komenzi nomzimba wakhe; kananjalo kukho ukusilela okuhambelanayo ukwahlula phakathi kweBrahman yendalo iphela kunye nendalo iphela. Ngemfundiso yeBrahman yendalo iphela njengomthombo kunye nesiphelo sabo bonke abantu, izigidi ezingenakubalwa zabenzi zigcinwe zingazazi iiSelves zabo zokwenyani; Kwaye ngaphezulu kulindelwe, kwanokunqwenela, ukuphulukana neBrahman kwindalo iphela eyona nto ibaluleke kakhulu umntu anokuba nayo: isazisi sokwenene, isiqu sakhe, phakathi kwezinye izinto ezingafiyo.
Kukho ubuncwane obungafihliwe ngokupheleleyo: IBhagavad Gita, eyona ibaluleke kakhulu kwiigugu zeIndiya. Yiperile yaseIndiya engaphaya kwexabiso. Iinyaniso ezihanjiswe nguKrishna kwiArjuna ziphakeme, zihle, kwaye zihlala ngonaphakade. Kodwa ixesha lembali ekude apho umdlalo usetwa kwaye ubandakanyeka, kunye neemfundiso zakudala zeVedic apho iinyaniso zayo zigutyungelwe zaze zagutyungelwa, zenza kube nzima kakhulu kuthi ukuqonda ukuba bathini abalinganiswa bakaKrishna noArjuna; zidibene njani; yintoni iofisi nganye komnye, ngaphakathi okanye ngaphandle komzimba. Imfundiso kule migca ihlonelwayo ngokufanelekileyo izele yintsingiselo, kwaye ingabaluleka kakhulu. Kodwa ixutywe kwaye yagutyungelwa yimfundiso yezakwalizwi kunye neemfundiso ezingokwesibhalo kangangokuba ukubaluleka kwayo kuphantse kufihlwe ngokupheleleyo, kwaye ixabiso layo lokwenyani liyancitshiswa.
Ngenxa yokunqongophala kokucaca kwefilosofi yaseMpuma, kunye nenyaniso yokuba kubonakala ngathi iyaziphikisa njengesikhokelo solwazi lomntu emzimbeni kunye nesiqu sakho sokwenene, imfundiso yakudala yaseIndiya ibonakala ngathi iyathandabuza kwaye ayinakuthenjwa. . Omnye ubuyela eNtshona.
Imizekeliso namazwi akwiincwadi zeVangeli anika ubungqina bobungangamsha, obulula nobunyaniso. Ukanti kwanabo babenikwe umyalezo omtsha kuqala kubonakala ukuba abawuqondanga. Iincwadi zichanekile, azenzelwanga ukulahlekisa; kodwa kwangaxeshanye bathi kukho intsingiselo yangaphakathi eyenzelwe abanyuliweyo; imfundiso eyimfihlo eyayingajoliswanga kubo bonke abantu kodwa "nabani na oya kukholelwa." Ngokuqinisekileyo, iincwadi zizele iimfihlakalo; kwaye kufuneka kucingelwe ukuba banxibe imfundiso eyayisaziwa ngabambalwa abaqalileyo. UBawo, uNyana, noMoya oyiNgcwele: ziimfihlakalo ezi. Iimfihlakalo, nazo, kukuKhulelwa okungafezekanga kunye nokuzalwa nobomi bukaYesu; kwangokunjalo ukubethelelwa emnqamlezweni, ukufa, nokuvuka kwakhe. Iimfihlakalo, ngokungathandabuzekiyo, izulu kunye nesihogo, kunye nomtyholi, kunye noBukumkani bukaThixo; kuba kunqabile ukuba ezi zifundo zazenzelwe ukuba ziqondwe ngokweemvakalelo, kunokuba zibe njengeempawu. Ngapha koko, kuzo zonke iincwadi kukho amabinzana kunye nemigaqo engacacanga ukuba ingathathwa ngokoqobo, kodwa ngengqiqo eyimfihlakalo; kwaye ezinye ngokucacileyo zinokubaluleka kumaqela akhethiweyo. Ngapha koko, akukho ngqiqweni ukucinga ukuba imizekeliso nemimangaliso yayinokunxulunyaniswa nenyaniso yokoqobo. Iimfihlakalo kuyo yonke indawo - kodwa akukho ndawo ityhiliweyo. Iyintoni yonke le mfihlakalo?
Eyona njongo icacileyo yeVangeli kukufundisa ukuqonda nokuphila kobomi bangaphakathi; ubomi bangaphakathi obuya kuvuselela umzimba womntu buze boyise ukufa, babuyisele umzimba wenyama kubomi obungunaphakade, imeko ekuthiwa iwile kuyo - "ukuwa" kwayo "sisono santlandlolo." Ngexesha elinye kufanele ukuba bekukho inkqubo eqinisekileyo yokufundisa eya kuthi icace gca ukuba umntu angabuphila njani ubomi bangaphakathi: indlela umntu anokuthi, ngokwenza njalo, angene ngayo kulwazi lobuqu bakhe bokwenyani. Ubukho beemfundiso ezifihlakeleyo ezinjalo kuyacetyiswa kwimibhalo yamaKristu okuqala ngokubhekisa kwiimfihlelo nakwiimfihlakalo. Ngapha koko kubonakala kucacile ukuba imizekeliso zizifaniso, izifaniso: amabali asekhaya kunye nemifanekiso yentetho, esebenza njengezithuthi zokuhambisa kungekuphela imizekelo yokuziphatha kunye neemfundiso zokuziphatha, kodwa kunye neenyaniso ezithile zangaphakathi, ezingunaphakade njengenxalenye yenkqubo ethile yokufundisa. Nangona kunjalo, iiVangeli, njengoko zikhona namhlanje, ziswele unxibelelwano oluya kufuneka ukwenza inkqubo; okuhlile kuthi akonelanga. Kwaye, malunga neemfihlakalo ekucingelwa ukuba ezi mfundiso zazifihliwe, akukho sitshixo saziwayo okanye ikhowudi esinikiweyo esinokuthi siyivule okanye siyicacise.
Oyena mntu ubenako kwaye uchaze ngokucacileyo iimfundiso zokuqala esizaziyo ngoPawulos. Amagama awasebenzisileyo enzelwe ukwenza intsingiselo yakhe icace kwabo babhekiswe kubo; kodwa ngoku imibhalo yakhe ifuna ukutolikwa ngokwemihla yangoku. "Incwadi yokuQala kaPawulos eya kwabaseKorinte," isahluko seshumi elinesihlanu, ibhekisa kwaye ikhumbuza iimfundiso ezithile; Imiyalelo ethile ecacileyo malunga nokuphila ubomi bangaphakathi. Kodwa kuya kucingelwa ukuba ezo mfundiso zazingazibophelelanga ekubhaleni- ezinokubonakala ziyaqondakala- okanye kungenjalo zilahlekile okanye zishiyiwe kwimibhalo eyehlileyo. Kuyo yonke imicimbi, "iNdlela" ayiboniswanga.
Kodwa namhlanje, kuthiwa, kukho inkululeko yokuthetha: umntu angatsho ngaphandle koloyiko lokufa oko akholelwa malunga neemfihlelo zobomi. Into umntu ayicingayo okanye ayaziyo ngomgaqo-siseko kunye nokusebenza komzimba womntu kunye nokuziqonda okuhlala kuwo, inyaniso okanye izimvo umntu anokuba nazo malunga nobudlelwane phakathi komntu oziquleyo kunye nesiqu sakhe sokwenyani, kwaye ngokubhekisele kwindlela yolwazi- -ezi akufuneki zifihlwe, namhlanje, ngamagama emfihlakalo afuna isitshixo okanye ikhowudi yokuqonda kwabo. Kumaxesha anamhlanje zonke "iingcebiso" kunye "neemfama," zonke "iimfihlelo" kunye "nolwaluko," ngolwimi olukhethekileyo lwemfihlakalo, kufuneka zibe bubungqina bokungazi, ukuzingca, okanye urhwebo olubi.
Enye yeendlela apho ezinye zezi nyaniso ziphoswa khona yi-Freemasonry. Inkqubo ye-Masonic indala njengohlanga loluntu. Ineemfundiso ezixabiseke kakhulu; kukhulu kakhulu, enyanisweni, kunokuba kuthathelwa ingqalelo ziMason ezingabagcini bazo. Umyalelo ulondoloze amaqhosha amandulo olwazi oluxabisekileyo malunga nokwakha umzimba ongunaphakade kulowo ungafiyo. Umdlalo wayo oyimfihlakalo uphambili ujongene nokwakhiwa kwakhona kwetempile eyatshatyalaliswayo. Oku kubaluleke kakhulu. Itempile luphawu lomzimba womntu ekufuneka indoda iwakhe ngokutsha, uyihlaziye kwakhona, ibe ngumzimba wenyama oya kuba ngunaphakade, unaphakade; Umzimba oya kuba yindawo efanelekileyo yokwenza into engafiyo. "ULizwi" "olahlekileyo" ngumenzi, ulahlekile emzimbeni womntu - amabhodlo etempile yakudala enkulu; kodwa eya kuzifumana njengoko umzimba uhlaziywa kwaye umenzi wayo ewulawula.
Le ncwadi ikuzisela ukuKhanya okungakumbi, ukuKhanya okungakumbi kwindlela ocinga ngayo; Ukukhanya ukufumana "iNdlela" yakho ebomini. UkuKhanya okukuzisayo, nangona kunjalo, ayikokukhanya kwendalo; kukuKhanya okutsha; intsha, kuba, nangona ibikho nje nawe, ubungayazi. Kula maphepha abizwa ngokuba kukuKhanya okuLungekileyo ngaphakathi; kukuKhanya okunokubonisa izinto njengoko zinjalo, ukukhanya koBukrelekrele odibene nako. Kungenxa yobukho bokuKhanya ukuze ukwazi ukucinga ekwenzeni iingcinga; iingcinga zokukubopha kwizinto zendalo, okanye ukukukhulula kwizinto zendalo, njengoko ukhetha kwaye uza kuthanda. Ukucinga okwenyani kukubamba okuzinzileyo kunye nokujolisa kokuKhanya okuNomdla ngaphakathi kumxholo wokucinga. Ngokucinga kwakho wenza ikamva lakho. Ukucinga ngokuchanekileyo yindlela yokwazi ngokwakho. Oko kunokukubonisa indlela, kwaye kunokukukhokelela kwindlela yakho, kukuKhanya koBukrelekrele, ukuKhanya okuNako ngaphakathi. Kwizahluko zamva zixelelwe indlela oku kuKhanya kufuneka kusetyenziswe ngayo ukuze kukhanye ngakumbi.
Oososayikholoji bale mihla bakhetha ukungalisebenzisi igama elithi umphefumlo, nangona belisoloko lisetyenziswa kulwimi lwesiNgesi kangangeenkulungwane ezininzi. Isizathu soku kukuba konke okutshiweyo malunga nento oyiyo umphefumlo okanye into eyenzayo, okanye injongo oyisebenzelayo, ibingacacanga, inamathandabuzo kwaye iyabhida, ukuze kuqinisekiswe ukuba isifundo senzululwazi ngalo mbandela. Endaweni yoko, oochwephesha bengqondo bathathe njengesihloko sesifundo sabo kumatshini wezilwanyana ongumntu kunye nokuziphatha kwawo. Kudala kwaqondwa kwaye kwavunyelwana ngabantu ngokubanzi, nangona kunjalo, ukuba umntu wenziwe "ngumzimba, umphefumlo, nomoya." Akukho mntu uthandabuzayo ukuba umzimba yinto ephilayo yezilwanyana; kodwa ngokubhekisele kumoya nomphefumlo kubekho ukungaqiniseki okuninzi kunye nengqikelelo. Kwezi zifundo zibalulekileyo le ncwadi icacile.
Incwadi ibonisa ukuba umphefumlo ophilayo uyinyani kwaye iyinyani. Ibonisa ukuba injongo nokusebenza kwayo kubaluleke kakhulu kwisicwangciso sendalo iphela, kwaye ayinakutshatyalaliswa. Kucacisiwe ukuba loo nto ibizwa ngokuba ngumphefumlo yiyunithi yendalo- isiqalelo, iyunithi yento ethile; kwaye eli lungu linolwazi kodwa lingenangqondo lelona liphezulu kakhulu kuzo zonke iiyunithi zendalo ekwakhiweni komzimba: lelona candelo liphakamileyo lombutho womzimba, liye laqhubela phambili kulomsebenzi emva kokufunda ixesha elide kwimisebenzi emininzi emincinci kubandakanya indalo. Ngenxa yoku ke isambuku sayo yonke imithetho yendalo, eli candelo likulungele ukusebenza njengomphathi jikelele ngokuzenzekelayo wendalo kwinkqubo yomzimba womntu; Kananjalo ikhonza umenzi ongenakufa kuyo yonke into ephilayo ekhoyo ngokwakha umzimba omtsha wenyama ukuba angene kuyo, kwaye ayigcine kwaye ayilungise loo mzimba ixesha elide njengokufunwa ngumenzi, njengoko kumiselwe ngumenzi ukucinga.
Umzimba wakho ngokoqobo sisiphumo sokucinga kwakho. Nokuba yintoni enokubonisa impilo okanye isifo, uyenza ngokucinga kwakho kunye nemvakalelo kunye nomnqweno. Umzimba wakho wangoku oyinyani uyimbonakaliso yomphefumlo wakho ongenakonakala, imo yokuphefumla kwakho; yiyo loo nto ingaphandle kweengcinga zamaxesha amaninzi obomi. Ingxelo ebonakalayo yokucinga kunye nokwenza kwakho njengomenzi, ukuza kuthi ga ngoku. Kule nyaniso kukho intsholongwane yokugqibelela komzimba kunye nokungafi.
Amandla esondo yenye imfihlelo ekufuneka isonjululwe yindoda. Kuya kuba yintsikelelo. Endaweni yoko, umntu uhlala esenza utshaba lwakhe, umtyholi, ohlala ekunye naye angenakuphuncula kuwo. Le ncwadi ibonisa indlela, ngokucinga, yokuyisebenzisa njengamandla amakhulu okulungeleyo ukuba kufanelekile; kwaye njani ngokuqonda kunye nokuzeyisa ukuze uvuselele umzimba kunye nokufezekisa iinjongo kunye neenjongo zikanqanaba lokuqhubela phambili.
Wonke umntu uyimfihlelo ephindiweyo: imfihlelo yakhe, kunye nemfihlakalo yomzimba akuyo. Unako kwaye uyisitshixo nesitshixo semfihlakalo ephindiweyo. Umzimba sisitshixo, kwaye usisitshixo kulo. Injongo yale ncwadi kukuxelela indlela yokuziqonda ngokwakho njengesitshixo semfihlelo yakho; ungazifumana njani emzimbeni; indlela yokufumana nokwazi isiqu sakho sokwenyani njengoLwazi lokuziQala; indlela yokuzisebenzisa njengesitshixo sokuvula iqhaga elingumzimba wakho; kwaye, ngomzimba wakho, ukuqonda nokuqonda iimfihlelo zendalo. Ungaphakathi, kwaye ungumqhubi womatshini womzimba ngamnye wendalo; isebenza kwaye isabela kunye nangokunxulumene nendalo. Xa usombulula imfihlelo yakho njengomenzi wolwazi lwakho kunye nokusebenza komatshini womzimba wakho, uya kwazi-kwiinkcukacha nganye kunye nakwezinto zonke-ukuba imisebenzi yeeyunithi zomzimba wakho yimithetho yendalo. Uya kuthi emva koko uyazi eyaziwa kunye nemithetho engaziwayo yendalo, kwaye ube nakho ukusebenza ngokuvisisana nomatshini omkhulu wendalo ngomatshini womzimba ngamnye okuwo.
Ixesha lutshintsho lweeyunithi, okanye ubunzima beeyunithi, ngokunxulumene kwazo. Le nkcazo ilula isebenza kuyo yonke indawo naphantsi kwawo onke amazwe okanye imeko, kodwa kufuneka icingwe kwaye isetyenziswe ngaphambi kokuba umntu ayiqonde. Umenzi kufuneka aqonde ixesha ngelixa esemzimbeni, evukile. Ixesha libonakala lahlukile kwamanye amazwe nakwimimandla. Ixesha labenzi bexesha elibonakalayo likhangeleka lingalingani ngelixa uvukile ephupheni, okanye xa ulele ubuthongo obunzulu, okanye xa umzimba usifa, okanye xa udlula emva kokufa, okanye ngelixa ulinde isakhiwo kunye nokuzalwa umzimba omtsha oya kuwudla ilifa emhlabeni. Elinye lala maxesha liba "Ekuqalekeni," ngokulandelelana, kunye nokuphela. Ixesha libonakala ngathi liyakhasa ebuntwaneni, libaleka ebutsheni, kwaye libaleka ngesantya esonyukayo kude kube sekufeni komzimba.
Ixesha yiwebhu yotshintsho, elukiwe ukusuka kunaphakade ukuya kumzimba womntu oguqukayo. Loom ekulukelwe kuyo iwebhu yindlela yokuphefumla. Ingqondo yomzimba ngumenzi kunye nomqhubi womluki, ispinishi sewebhu, kunye nomluki wezigqubuthelo ezibizwa ngokuba "zangaphambili" okanye "zikhona" okanye "ezizayo". Ukucinga kwenza ukuhamba kwexesha, ukucinga kujikeleza iwebhu yexesha, ukucinga ukuluka izigqubuthelo zexesha; kwaye ingqondo yomzimba iyacinga.
IZazela yenye imfihlelo, eyona inkulu neyona inkulu kuzo zonke iimfihlakalo. Igama Ukuqonda lilodwa; ligama lesiNgesi eliqanjiweyo; ukulingana kwayo akubonakali kwezinye iilwimi. Ixabiso elibaluleke kakhulu kunye nentsingiselo ayixabiswanga, nangona kunjalo. Oku kuya kubonakala ekusebenziseni okwenziwe ligama ukukhonza. Ukunika imizekelo eqhelekileyo yokusetyenziswa gwenxa kwayo: Kuviwe kumabinzana anjengelithi "ukwazi kwam," kunye "nokuqonda komntu"; nakwezinye izinto njengokuqonda izilwanyana, ukuqonda komntu, umzimba, ingqondo, i-cosmic, kunye nezinye iintlobo zokuqonda. Kwaye ichazwa njengesiqhelo ukuqonda, kwaye inkulu kwaye inzulu, kwaye iphakamileyo kwaye isezantsi, ngaphakathi nangaphandle, ukuqonda; kunye nokuqonda ngokupheleleyo nangokungaphelelanga. Ukukhankanywa kukwavakala ngokuqala kwengqondo, kunye notshintsho lwengqondo. Umntu uyeva abantu besithi banamava okanye babangele ukukhula, okanye ulwandiso, okanye ulwandiso, lokuqonda. Ukusetyenziswa gwenxa kwegama kuqhelekile kula mabinzana afana nala: ukulahlekelwa sisazela, ukubambelela ezingqondweni; ukubuyisela kwakhona, ukusebenzisa, ukuphuhlisa ukuqonda. Kwaye umntu uyeva, ukuqhubekeka, kwamazwe ahlukeneyo, kunye neenqwelomoya, kunye needigri, kunye neemeko zokuqonda. Ukuqonda kukhulu kakhulu ukuba ungafaneleka, unqunyelwe, okanye umiselwe. Ngenxa yale nyaniso le ncwadi isebenzisa eli binzana: ukwazi, okanye njenge, okanye ngaphakathi. Ukucacisa: nantoni na eyaziwayo nokuba yeyokuqonda izinto ezithile, okanye njengoko injalo, okanye iyazi kwindawo ethile inqanaba lokwazi.
Kubo bonke ubomi bakho emhlabeni ubukade ufuna ngokungapheliyo, ulindele okanye ukhangele umntu okanye into engekhoyo. Uziva ngokungacacanga ukuba ukuba unokufumana kodwa oko ukulangazelelayo, uyokwaneliseka. Iinkumbulo ezimdaka zeminyaka ziyaqengqeleka; ziimvakalelo ezikhoyo zelixa lakho lilibele; banyanzelisa ukudinwa okokoko kwe-treadmill yamava kunye nokungabi nto kunye nokuzamazama komgudu womntu. Kusenokwenzeka ukuba ukhe wazama ukwanelisa loo mvakalelo nosapho, ngomtshato, ngabantwana, phakathi kwabahlobo; okanye, kwishishini, ubutyebi, i-adventure, ukufumanisa, uzuko, igunya, kunye namandla-okanye nangayo nayiphi na enye imfihlo engaziwayo yentliziyo yakho. Kodwa akukho nto yezivamvo ezinokwanelisa lo mnqweno. Isizathu kukuba ulahlekile-yinxalenye elahlekileyo kodwa engenakwahlulwa yinto engafiyo engu-Triune Self. Amaxesha adlulileyo, wena, njengemvakalelo-kunye-nomnqweno, inxenye yomenzi, ushiye iingcinga kunye nokwazi iinxalenye ze-Triune Self yakho. Ke ulahlekile kuwe kuba, ngaphandle kokuqonda kwakho isiqu sakho esithathu, awunakuziqonda ngokwakho, ulangazelelo lwakho kunye nokulahleka kwakho. Ke ngoko ukhe uzive ulilolo. Ulibale iindawo ezininzi obukhe wadlala ngazo kweli hlabathi, njengobuntu; kwaye ulibele ubuhle bokwenene kunye namandla owaziyo ngelixa ucinga kunye nolwazi lwakho kwi-Realm of Permanence. Kodwa wena, njengomenzi, ulangazelela umanyano olungeleleneyo lweemvakalelo-kunye nomnqweno wakho emzimbeni ogqibeleleyo, ukuze uphinde ube kunye namalungu akho okucinga kunye nolwazi, njenge-Triune Self, kwi-Realm of Permanence. Kwimibhalo yakudala kuye kwakho ukungahambelani kolo hambo, kumabinzana anjengelithi "isono santlandlolo," "ukuwa komntu," njengakwilizwe kunye nommandla lowo wanelisekileyo kuwo. Olo rhulumente kunye nendawo obushiye kuyo ayinakuyeka ukubakho; inokuphinda izuzwe ngabaphilayo, kodwa hayi emva kokufa ngabafileyo.
Ungazibekela ecaleni ezi zifundo ubomi bakho bonke kangangoko ufuna, okanye uzifunde ngokukhawuleza kangangoko unakho - oko kukuthi, nguwe oza kuthatha isigqibo; kodwa ekuhambeni kwexesha uya kuzifunda.